Galvanized Steel Coil, Zm Steel Coil, Aluminized Steel Coil - Zhanzhi
2302 NO.57 Jinbin Avenue, Distrikan'i Hedong, Tianjin, Sina
Coil vy mihodina ary mangatsiaka ary taratasy
CRCA Mangatsiaka mifatotra coil vy annealed
CRNGO coil vy vy tsy miorina amin'ny voamadinika mangatsiaka
Vy mifono vy
Haja vita amin'ny aliminioma
Zinc-aluminium-magnesium zm vy vy
Mombamomba ny vy vita mangatsiaka
Mombamomba ny vy mihodina mafana
Mombamomba ny vy hafa
Vokatra fanodinana vy
Famerenana vy sy fanodinana vy
Pile vita amin'ny vy
Tady vy sy fanodinana vy
Sodina vita amin'ny vy sy fantsom-by
Sodina vy & fantsona vy
Coil vy & esory vy & ravina
Tavoahangy vita amin'ny vy
Sodina vy sy fantsona
Momba ny vy tsy misy fangarony
Coil & strip ary takelaka aluminium
Mombamomba ny aliminioma
Aluminium efa nomanina
Amin'ny alàlan'ny indostrian'ny orinasa metaly metaly China, ny varotra vy sy ny lojika nasionaly "orinasa matanjaka an-jatony", orinasam-barotra vy any China, "orinasa tsy miankina top 100 any Shanghai".
Ny vokatray dia tafiditra amin'ny milina fanodinana, injenieran'ny firafitra vy, fiarovana ny tontolo iainana, famokarana fitaovana, injeniera herinaratra elektrika, fiara, fanamboarana sambo ary indostria hafa.
Ny fanodinana vy sy fizarana
Mba hanomezana tsara kokoa ny fanodinana vy iray, fitehirizana, serivisy fizarana ho an'ny mpanjifa, ny orinasa dia nanangana ny foibe fanodinana vy sy fizarana vy any Shanghai, Quanzhou, hamaly ny filan'ny vondrona mpanjifa samihafa.
Fitaovana vy sy solika
Ho an'ny faritry ny indostrialy vy any an-dafin'ny firoboroboana sy ny fanitarana ny akora vy sy ny orinasa solika, ny orinasanay dia mametraka fotodrafitrasa vy sy fotodrafitrasa famatsiana solika.
Fampiasam-bola sy fananam-bola
Ny orinasanay dia mivoatra mavitrika amin'ny sehatry ny fivelarana varotra isan-karazany manodidina ny varotra vy lehibe, tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny trano sy ny asa ara-bola.
Shanghai Zhanzhi Industry Group Co., Ltd., natsangana tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, miorina ao amin'ny Distrikan'i Yangpu Shanghai, dia vondrona orinasa lehibe feno, manambatra ny varotra vy, ny fanodinana ary ny fizarana vy, akora vy, fampandrosoana ny trano, famatsiam-bola. sy indostria hafa. Ny renivohitra voasoratra anarana dia 200 tapitrisa RMB ...
Fa manontany momba ny vokatra na pricelist anay, azafady avelao izahay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
Zhanzhi Group any Guangdong, Fuzhou, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Shanxi, Tianjin, Liaoning, Lanzhou, Wuxi ary faritra hafa dia nanangana orinasa mpanampy 13, manana mpiasa mihoatra ny 1000, varotra vy isan-taona ny vokatra vy mihoatra ny 3,5 tapitrisa taonina .. .
Ho an'ny fitantanana kilasy voalohany, fampiofanana ekipa kilasy voalohany, ezaho ny kalitaon'ny kilasy voalohany, hahazoana tombony amin'ny kilasy voalohany.
Mena miloko vy PPGI mifono ...
Z275 nandrisika Steel Coil ...
Raha mbola miakatra hatrany ny vidin'ny vy, 7.7% ny tahan'ny vy isam-bolana (MMI) isam-bolana tamin'ity volana ity. Vonona ve ianao amin'ny fifampiraharahana amin'ny fifanarahana vy? Aza hadino ny mamerina mijery ireo fomba fanao dimy tsara indrindra. Araka ny nosoratanay tao amin'ny tsanganana tamin'ity volana ity, ny vidin'ny vy dia tsy mitsaha-miakatra hatrany hatramin'ny summe farany ...
Ny zoma, nirongatra ho an'ny herinandro fahadimy nifandimby ny ho avy vy lehibe any Azia. Nihena ny famokarana vy manohitra ny fandotoana tany Chine, mpamokatra lehibe iray, ary nitombo ny fangatahana vy manerantany, nanosika ny vidin-tsolika vy hanoratra avo. Ny tombam-bidin'ny vy amin'ny volana septambra ao amin'ny China Dalian Commodity Exchange dia nakatona ...
Tamin'ny 28 aprily, ny tranokalan'ny Minisiteran'ny Vola dia namoaka fanambarana momba ny fanafoanana ny tamberimbidy haba ho an'ny vokatra vy sasany. Hofoanana manomboka amin'ny 1 Mey 2021 ny fanafoanana hetra fanondranana ho an'ny vokatra vy sasany. Ny fotoana fanatanterahana manokana dia faritana amin'ny daty fanondranana voalaza ...
Mitazona tànana, ndao hiara-mandeha amin'ny volana aprily, i Tianjin dia feno lohataona, rahona maivana ary rivotra tsio-drivotra. Amin'ity lohataona ity dia miverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra, raisinay an-dry Tianjin Zhanzhi ny ampahefa-potoana voalohany an'ny 2021 Dongli Lake 12-kilometatra hetsika fananganana ekipa. Amin'ny 8 ora sy sasany sabotsy maraina, ...
Tatitra fihaonambe momba ny fitantanana isan-taona an'ny vondrona Zhanzhi 2021 Zhanzhi Group dia natao tao amin'ny Sanjia Port, Pudong New Area, Shanghai ny 25 martsa hatramin'ny 28 martsa. Olona 54 ao anatin'izany ny mpitantana ny vondrona, ny mpitantana jeneralin'ny zanabola ary ny mpitantana ny foibe foibe no nanatrika ny ...